Dhagayso+ Akhriso: Waa Hees Cusub, Erayadii Boobe Yuusuf Ducaale
Heestan ayaa loogu wanqalay Haamo-dhowr. Waa ereyadii Boobe Yuusuf Ducaale, Laxankii Mustafe kiiko. waxa ku qaadaya Maxamed Miyir iyo Qadan Cali..
Haa……Miyaan dheelalaysnahay, mise waan dhadhabayaa? Boqol sannadood kama soo wareegin shalay iyo maanta. Intii labada jeerba joogtay in badan oo ka mid ah ayaa nool. Mudane Axmed Maxamuud Maxamuud (Siilaanyo) iyo aniguba ka mid ayaanu nahay.
Danjire Qaybe: Ruug-caddaagii Diblomaasiyadda Soomaaliyeed (1930kii – 2013ka)
‘Si aanay taariikhdu u lumin qof kasta oo qalin iyo warqad isu qaata oo damca taariikhdii uu soo maray in uu wax ka qoro, isaga ayaa ka mas’uul ah wixii dhalliilo qoraalkiisa ku soo baxa.
Xaaladda Kulmiye: Xiiso-tirka Xisbinnimada
La ye Xisbigii Kulmiye ayaa is-abaabulaya. Oo goorma ayaa inoogu dambeysay? Araggiisa waxa inoogu dambeysay 2010kii berigii ay dadweynaha beenta iyo belaayada ka siisteen codadkoodii. Beryihii Barnaamaj-baaskii.
Hubaal miyaa la Hilmaamay…..Miyaan Hiil la Hureyn!
Marka hore aanu hambalyada iyo bogaadintaba ku darsanno Golaha La-tashiga iyo Toosinta ee lagu dhawaaqay. Suurto-gal ma aha in la iska aammusnaado
Hoombaro libaax bay soo waddaa (Istanbuul maxay ii soo waddaa)
Hadal-haynteenna maalmahan ayaa u badan bishan barakaysan iyo waayaha inagu xeeran dal ahaan iyo dad ahaanba. In la wada hadlo ama tiraab wax la isugu sheego wax ka fiicani ma jiro.
Haa….Immika ayaad mooddaa in la soo miiraabay. Hal-hays ayaynu u leenahay cirkii ayaa soo yeel-yeelanaya. Waa marka ay daruuruhu samaysmayaan ee ay is-raadsanayaan si ay u darrooraan.
Ma anigaan wax dhaadayn!
Haa………….Waa run. Maalin Isniineed habeennimadeedii ayay ahayd. Bil ammaara bishan idman ee Meey ee aynu ka yeelannay bilihii baas 27dii ayay ahayd. Gurigayga ayaan joogay. Waa caways iyo xilliyadii wararka.
Maantana ma Jiitama iyo jidiin-caddaadkii
Barinaye ma barideen. Maqaalkan gaaban waxaan u holladay in aan qoro maanta oo ay bisha Abriil tahay 26, 2013ka. Waa maalin Jimce ah.
Qiimee qofkaaga qalloocan, si’ aad u qiimo-tirto qofkaaga qumman
Waa Qormooyin Qormadood. Waa qudh qudha…Waa suke….Waanay qalliban tahay, mar labaadna qalinka loo qaadi maayo oo umaba qalanto. Qadhiidh, qadhaab, qardhac, qabax iyo quud aan qoryo loo guran.
Taariikh-nololeedkii Ibraahin Sheekh Saleebaan (Ibraahin-gadhle)
Ibraahim Sheekh Saleebaan oo loo yaqaannay Ibraahin-gadhle, wuxu ku dhashay Tuulada Cadaadda oo ka tirsan Killilka 5aad ee dalka Itoobiya 1940kii, hase yeeshee xilligaa ka tirsanayd Maxmiyaddii Ingiriisku xukumi jiray ee Somaliland.
Maxaa maanta I nala gudboon?
Bisinka. Waa maalmihii ay ayeeyooyinkeen Tiirka Bir ah cuskan jireen, innagana Ilaahay inama seejiyo. Waan qabaa dareenkiinna. In badan oo idin ka mid ah ayaa leh ama saaka odhanaya waa kaa taxane kale bilaabay,
Waabeeye waabee: Kulmiyaana kadan
Uma hollan in aan wax badan idin idhaahdo. Qalin daansho-socodka derrimaha madheedhka leh tiiq-tiiqsan jiray,
Waraysi Boobe Yuusuf Ducaale